"Barcelona Waa Messi, Haddii Uu Isagu Go'aansado Inuu Tago Waxaan U Baahanahay Inaan Kooxda Magac Kale U Raadino" - Gool24.Net
“Barcelona Waa Messi, Haddii Uu Isagu Go’aansado Inuu Tago Waxaan U Baahanahay Inaan Kooxda Magac Kale U Raadino”
Halyeeyga kooxda Barcelona ahna xiddiga ree Africa ee sumcada weyn ku dhex kubadda cagta caalamka ee Samuel Eto’o ayaa amaanay kabtanka kooxdiisii hore ee Lionel Messi xilli uu ka hadlay wararka sheegaya inuu kooxda ka tagayo.
Dhawaan ayay ahayd markii warar laga helay saxaafada Spain ay shaaca ka qaadeen in Lionel uu maamulka sarre ee Barcelona u sheegay inuu doonayo inuu xagaagan iskaga tago kooxda oo uusan sugi karinba sanadka dambe ee heshiiskiisu dhacayo.
Messi ayaa si weyn uga cadhaysan kala daadsanaanta baahsan ee kooxdiisa ku dhacday xilli ciyaareedkan oo ay intiisa badan soo dhibtoonaysay, Bayern Munich ayaa liidasho kasta oo ay Barca lahayd banaanka keentay isla markaana 8-2 kaga reebtay Champions League.
Haddaba, Eto’o oo haatan ka hadlaya wararka bixitaan la xidhiidhinaya Messi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo waxkasta oo macquul ah si 33 sano jirka ree Argentina Camp Nou loogu sii hayo.
Dhinaca kale Samuel Eto’o oo muujinaya muhiimada uu Barcelona u leeyahay Messi ayaa sheegay in kooxdu ay isaga tahay oo ay u baahan doonto inay magaca iska bedesho haddii uu ka dhaqaajiyo.
“Waxa jirta baahi loo qabo in la sameeyo waxkasta oo macquul ah si loo hubiyo inuu Messi waayihiisa ciyaareed ku dhammaysanayo Barcelona” ayuu yidhi Eto’o oo u warramayay TyC Sport.
“Waxaan u jeclahay Leo sida inuu wiilkayga yahay oo kale, Barcelona waa Messi, anigu markasta waxa ugu wanaagsan ayaan u doonayaa Messi laakiin kooxdu waa Messi”
“Haddii uu go’aansado inuu tago kaddib waxaan u baahanahay inaan isku dayno inaan u helno magac kale kooxda, nasiib ayaan ku leenahay inaan hadda haysano ciyaaryahanka ugu wanaagsan abid”